ကရ​ဝိက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကရဝိတ်ဖောင်အား ညအခါ ရှုမြင်ရပုံ
ကရဝိက် (သို့) ကရဝိက် ဖောင်သည် ကန်တော်ကြီး၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းနားတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းဖောင်အား ဗိသုကာပညာရှင် ဦးငွေလှိုင် သည် တော်ဝင်ပြည်ကြီးမွန် ဖောင်အားအခြေခံ၍ ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ဤဖောင်သည် ကွန်ကရစ် နှစ်ထပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သံချောင်းများဖြင့် ပိုမိုခိုင်ခံ့အောင် ပြုလုပ်ပြီး အမိုးကိုပြာသာဒ် အမိုးဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။
ကန်တော်ကြီး အရှေ့ဘက်ကမ်း၌ တည်ရှိသော ကရဝိတ်ဖောင်
မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းတွင် ကရဝိက်ဟု ရေးသည်။ ကရဝိတ်ဟုသော စကားလုံးသည် ပါဠိဘာသာ "ကရဝိက"မှ ဆင်းသက်လာပြီး သာယာသော အသံရှိသော ဒဏ္ဍာရီလာ ဆန်းကြယ်သော ငှက်ဖြစ်သည်။
ကရဝိက် ဆိုတာ ဆက်ရက်ငှက်ပါကွာလို့ ပြောသည့် လူများရှိကြရာ ထိုကဲ့သို့ပြောသူများကို မှားတယ်ဟု ငြင်းရန်ခက်ပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကရဝိက် အစပြုသော ကိန္နရာ၊ ကိန္နရီ၊ ဂဠုန်၊ ဟင်္သာ၊ ခြင်္သေ့၊ စာမရီ၊ နဂါး၊ နရား တို့မှာ ဆန်းကြယ်သော သတ္တဝါများအဖြစ် ပန်းချီဆရာ လက်စွမ်းရှိသလောက် ခြယ်လှယ်ထားသော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ ကိန္နရာရုပ်ရေးသည့်အခါတွင် ငှက်၏ကိုယ်လုံးပေါ်၌ လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု ထပ်ဆင့်တင်ပေးထားသော်လည်း ဆန်းကြယ်လှပသော သတ္တဝါတစ်ခုအဖြစ် လူအများ၏အမြင်တွင် မေးခွန်းမရှိပဲ လက်ခံလိုက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပန်းချီဆရာက ဉာဏ်ရှိသလို ခြယ်လှယ်သည် ဆိုရာတွင် ပဒေသရာဇ်ခေတ်တွင်မှ စတင်သည်ဟု ဆိုသင့်သည်။
ကရဝိက်ငှက်သည် ဟိမဝန္တာ ဥဩ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အလွန်သာယာသော အသံများကို ကရဝိက်သံ၊ ကြိုးကြာသံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိခြင်းကို ထောက်သော် ကရဝိက်ငှက်သည် အလွန်အသံသာယာသော ငှက်မျိုးဖြစ်ဟန်တူပေသည်။
ကရဝိက်ဖေါင်ဟုခေါ်သော ရေယာဉ်တွင် ကရဝိက်ငှက်၏ သဏ္ဌာန် တည်ဆောက်လေ့ ရှိကြသော်လည်း၊ နှုတ်သီးရင်အုပ် အတောင်နှစ်ဖက်နှင့် ငှက်တစ်ကောင်အဖြစ်ကိုသာ သာမန် အားဖြင့် သိကြရ၍ အမှတ်အသား အတိအကျ မရှိချေ။ ဤ ငှက်၏ဥ၊ အသိုက်နှင့် အလေ့အထများကိုလည်း တိကျစွာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။
↑ Tin Mg Oo (2003). Aspects of Myanmar Culture. Yangon: Zun Pwint Publishing House, 78–79။ 2010-09-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kandawgyi Nature Park။ January 5, 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ သန်းထွန်း - သမိုင်းထဲက ဒီဇိုင်း
ကိုဩဒိနိတ်: 16°47′42.77″N 96°10′5.00″E﻿ / ﻿16.7952139°N 96.1680556°E﻿ / 16.7952139; 96.1680556
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကရ​ဝိက်&oldid=491450" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။